ကင်တပ်ကီ WIC | JPMA, Inc
ဘယ်လို eWIC ကတ်နဲ့ငါ့အကြိုးခံစားခှငျ့ရပါသလဲ?
ဆေးခန်းဝန်ထမ်းမတိုင်မီကဲ့သို့တူညီသောသင့်ရဲ့အစားအသောက်ပစ္စည်းများထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ လတိုင်းအဘို့သင့်အကြိုးခံစားခှငျ့အစအဦးနေ့စွဲပေါ်တွင်သင်၏အကောင့်ထဲမှာဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏အတည်ပြုအစားအစာများကိုဝယ်ယူသည့်အတိုင်းသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုချိန်ခွင်လျှာလျော့ကျပါလိမ့်မယ်။
အစအဦးနေ့စွဲအပေါ် 12 သန်းခေါင်နှင့် 00 မှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးပါလိမ့်မယ်: အကျိုးကျေးဇူးများ 12 မှာသင့် EBT အကောင့်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဇာတ်သိမ်းနေ့စွဲအပေါ် 00 သန်းခေါင်။
တစ်ဦးက PIN ကိုသာသင်သည်သင်၏ eWIC ကဒ်သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုတဲ့ဂဏန်းလေးလုံးလျှို့ဝှက်ချက်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏ကဒ်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုချက်မယူဘူးသောမည်သူမဆိုရန်သင့် PIN ကိုမပြောပါနှင့်။ တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ PIN ကိုသိတယ်သူတို့သင့်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲသင်၏အစားအစာအကျိုးကျေးဇူးများကိုရရန်သင့်ကဒ်ကိုသုံးလျှင်ထိုအကျိုးကျေးဇူးများကိုအစားထိုးပေးမည်မဟုတ်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းဤကဲ့သို့သောသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံအိတ်အတိုင်း, သင်တို့၏ကဒ်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနိုင်ဘယ်မှာမဆိုအရပ်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့ PIN ကိုမရေးသင့်ပါတယ်။
အဘယျသို့အကြှနျုပျသ PIN ကိုမေ့လျော့နေလျှင်?
သင်သည်သင်၏ PIN ကိုမေ့လျှင်, သင့် WIC ဆေးခန်းကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်တစ်ဦး PIN ကိုရှေးခယျြတဲ့အခါမှာတစ်စုံတစ်ဦး (ဥပမာ, သင့်ကလေး၏သို့မဟုတ်မိဘ၏မွေးနေ့) ထုတ်တွက်ဆရန်အဘို့အသငျသညျလေးကိုသင်မှတ်မိဖို့လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်များ, ဒါပေမယ့်ခက်ရှေးခယျြသငျ့သညျ။
သင်သည်သင်၏ PIN ကိုသတိရဒုက္ခရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, တစ်ဦး POS terminal ကိုပေါ်ဝင်ရောက်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ PIN ကိုခန့်မှန်းဖို့မကြိုးစားကြဘူး။ သငျသညျကွိုးစားပါပု 4th အားဖြင့်မှန်ကန်သော PIN ကိုမသွင်းမကြလျှင်, သင့်ရဲ့အကောင့်ကိုတစ်စုံတစ်ဦးကသင့်ရဲ့ PIN ကိုခန့်မှန်းနှင့်သင့်အစားအစာအကျိုးခံစားခွင့်ကို အသုံးပြု. ကနေကာကွယ်ပေးဖို့သော့ခတ်ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျနောက်တစ်ကြိမ်ကြိုးစားရန်သော့ဖွင့်ရန်သင့်အကောင့်အတွက်သန်းခေါင်ပြီးနောက်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
တစ်စုံတစ်ဦးကငါ့အ PIN ကိုထွက်တွေ့ပါလျှင်ငါသည်အဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်း
တစ်စုံတစ်ဦးကပြုလုပ်ရှိသည်မဟုတ်သင့်ကြောင်းသင်၏ PIN ရှိပါကချက်ချင်းသင့်ရဲ့ PIN ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သင့် WIC ဆေးခန်းကိုဆက်သွယ်ပါ။
သင့်အကောင့်လက်ကျန်ငွေကိုသိရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းသင့်ရဲ့လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏နောက်ဆုံးလက်ခံရရှိရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရင်ဆေးခန်းသို့မဟုတ်စတိုးဆိုင်မှာ EBT ကတ်ကိုစာဖတ်သူအတွက်သင့်ရဲ့ဟန်ချက်ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သင်အမြဲသင်ဆိုင်မတိုင်မီကျန်ရှိနေသောအတည်ပြုအစားအစာပမာဏကိုစစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါ POS စက်အလုပ်မလုပ်လျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း
နောက်ထပ် POS စက်ကြိုးစားခဲ့ရပါမည်သို့မဟုတ်သင်အခြားပါဝင်စတိုးဆိုင်ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ WIC ဆေးခန်းကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်တစ်ဦးကိုအစားထိုးကဒ်ရဖို့ရှိနိုင်ပါသည်။
သင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ခိုးယူလျှင်, သင့် WIC ဆေးခန်းဆက်သွယ်ပြီးသူတို့တစ်တွေအစားထိုးကဒ်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ eWIC ကဒ် Save! သင့်ရဲ့ WIC အစားအစာများကိုအသုံးပြုကြသည်တောင်မှသည့်အခါ, သင့် eWIC ကဒ်ပြန်သုံးနိုင်သောဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏နောက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသင့်ရဲ့ eWIC ကဒ်နှင့်အတူဝင်ရောက်လိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့ EBT ကတ်ကိုအသုံးပြုခြင်း
1 ။ သင့်အကောင့်ကို Balance Check
တစ်ဦး EBT ကတ်ကိုစာဖတ်သူလည်းမရှိလြှငျ, စျေးဝယ်ရှေ့၌သင်တို့ချိန်ခွင်လျှာစစ်ဆေးပါ။ သင့်ရဲ့ကဒ်တွန်းနှင့်သင်တို့၏ချိန်ခွင်လျှာကိုရရန်သင့် PIN ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
2 ။ သင့် WIC အစားအစာများအဘို့အဆိုင်
သင့်ရဲ့အကြိုးကြေးဇူးမြားခွောကျသှေ့သို့မဟုတ်လုပ်နိုင်ပဲမျိုးစုံ / ပဲပါဝင်သည်လျှင်, သင်တစ်ဦး 16 အောင်စအိတ်သို့မဟုတ်စည်သွတ်ပဲမျိုးစုံ / ပဲစေ့တွေဟာ၏ 4-16 အောင်စဗူးတစ်ခုခုဝယ်ဖို့နိုင်ပါတယ်။ အားလုံး4သံဗူးတစ်ကြိမ်မှာဝယ်ယူခံရဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, သင်မူကားသံဗူးကိုဝယ်ယူ start တစ်ကြိမ်, အဲဒီအရေအတွက်အဘို့သင့်ကျန်ရှိသောလက်ကျန်ငွေဒီတော့အခြောက်ပဲလက်ကျန်၏အဘို့ကိုထံမှဝယ်ယူမရနိုင်သံဗူးအဘို့ဖြစ်လိမ့်မည်။
3 ။ အဆိုပါစစ်ဆေးမှု-Out မှာ
သင့်ရဲ့ WIC EBT ကတ်ကိုအဆင်သင့်ရှိသည်။
မည်သည့်အစားအစာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့မီ, သင်က WIC EBT ကတ်ကိုအသုံးပြုနေသည်စတိုးဆိုင်ငွေရှင်းကောင်တာတွင်ပြောပြပါ။
ငွေရှင်းကောင်တာတွင်သငျသညျကိုပြောပြသောအခါ, WIC EBT ကတ်ကိုစာဖတ်သူအတွက်သင့်ရဲ့ကဒ်လျှောဒါမှမဟုတ်ငွေရှင်းကောင်တာတွင်ရန်သင့် eWIC ကဒ်လက်။
သငျသညျယ်ယူလတ်ဆတ်သောအသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အစာအဟာရပစ္စည်းများကိုနှင့်ဒေါ်လာစျေးတန်ဖိုးကိုသင့်အကောင့်ကနေနုတ်ယူလိမ့်မည်။ သာသင့်ရဲ့အတည်ပြုအစားအစာဝယ်ယူ၏အတိအကျပမာဏကိုသင့်ရဲ့ WIC အကျိုးအတွက်အကောင့်မှနုတ်ယူသည်။
အဆိုပါစာရေးသင်တစ်ဦးလက်ခံရရှိကိုငါပေးမည်။ ဤသည်ကိုလက်ခံရရှိနေဆဲသင့်အကောင့်၌ကျန်ကြွင်း WIC အစားအစာများ၏ပမာဏနှင့်ပမာဏ (ရှိပါက) ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။
4 ။ သင့်ရဲ့ကဒ်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ
သင်၏ကဒ် re-useable ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုတီဗီ, ရေဒီယို, VCRs, မိုက်ခရိုဝေ့, ဆဲလ်ဖုန်းသကဲ့သို့, ကွာသံလိုက်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများမှသင်၏ကဒ်ကိုသိမ်းဆည်းထားပါ
သင်၏ဒေသဆိုင်ရာ WIC site သို့မဟုတ် Kentucky WIC Help desk သို့ဆက်သွယ်ပါ 1-877-597-0367 မေးခွန်းများနှင့်အတူ option တစ်ခု။
အဆိုပါ WICShopper app ကိုအတူထောက်ခံမှုများအတွက်, အီးမေးလ် wicshopper.support@jpma.com.
WIC Authorized စားနပ်ရိက္ခာများစာရင်း
Ver la lista က de alimentos en Español
ကြံ့ဖွံ့ WIC ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိပါ
ဖက်ဒရယ်လူထုအခြေပြုဥပဒေနှင့်အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာန (USDA) ၏လူထုအခြေပြုအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ USDA၊ ၎င်း၏အေဂျင်စီများ၊ ရုံးများနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၊ USDA အစီအစဉ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းသို့မဟုတ်စီမံခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောအဖွဲ့အစည်းများသည်လူမျိုး၊ USDA မှကောက်ယူသောသို့မဟုတ်ငွေကြေးထောက်ပံ့သည့်မည်သည့်အစီအစဉ်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်မှုတွင်မဆိုကြိုတင်နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက်အမျိုးသားမူရင်း၊ လိင်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ အသက်၊ သို့မဟုတ်လက်စားချေမှုသို့မဟုတ်လက်တုံ့ပြန်မှု။
မသန်စွမ်းသူများအနေဖြင့်အစီအစဉ်သတင်းအချက်အလက် (ဥပမာ - မျက်မမြင်စာ၊ ပုံနှိပ်စာလုံးကြီး၊ အော်ဒီယိုတိပ်၊ အမေရိကန်လက်သင်္ကေတပြ) အစရှိသည့်ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများလိုအပ်သောအကျိုးခံစားခွင့်လျှောက်ထားသည့်အေဂျင်စီသို့ဆက်သွယ်သင့်သည်။ နားမကြားသောသို့မဟုတ်နားမကြားသောသို့မဟုတ်မိန့်ခွန်းမသန်စွမ်းသူများသည် Federal Relay Service မှ (800) 877-8339 မှ USDA သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အစီအစဉ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအင်္ဂလိပ်မဟုတ်သောအခြားဘာသာစကားများဖြင့်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ခွဲခြားဆက်ဆံမှု program တစ်ခုတိုင်ကြားရန်, ဖြည့်စွက် ကြံ့ဖွံ့အစီအစဉ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတိုင်ကြားချက် Form ကို, (AD-3027) အွန်လိုင်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ တစ်ဦးတိုင်ကြားချက် File ကိုဘယ်လိုနှင့်မည်သည့် USDA ရုံးတွင်မဆို USDA သို့လိပ်မူသည့်စာတစ်စောင်ကိုရေးပါ။ တိုင်ကြားချက်ပုံစံမိတ္တူကိုတောင်းခံရန် (866) 632-9992 ကိုခေါ်ပါ။ သင်၏ဖြည့်စွက်ထားသောပုံစံသို့မဟုတ်စာကို USDA သို့တင်ပြပါ။
မသန်စွမ်း presentar una denuncia က de discriminación, ပြည့်စုံ el Formulario က de Denuncia က de Discriminación del Programa del ကြံ့ဖွံ့, (AD-3027) Que está disponible en línea en: တစ်ဦးတိုင်ကြားချက် File ကိုဘယ်လို။ က y en cualquier oficina del ကြံ့ဖွံ့, o Bien escriba una carta dirigida အယ်လ်ကြံ့ဖွံ့ကeincluya en la carta Toda la información solicitada en el formulario ။ မသန်စွမ်း solicitar una copia del formulario က de denuncia, အယ်လ် (866) 632-9992 llame ။ Haga llegar su formulario lleno ဏ carta အယ်လ်ကြံ့ဖွံ့ por:
(၁) ဆက် - အမေရိကန်စိုက်ပျိုးရေးဌာနလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူး၏နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး
(3) correo electronic: program.intake@usda.gov ။